Entertainment Archives - Lifestyle Myanmar
Fans တွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဟာ ”Rude”အဖြစ်ဆုံး အဖွဲ့လား?
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲပြောနေပါစေ BLackpink အဖွဲ့ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ K-Pop လောကထဲမှာ အကျော်ကြားဆုံး၊ အအောင်မြင်ဆုံးမိန်းကလေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ သူတို့ဟာ ''How you like that'' နဲ့အတူ အောင်မြင်စွာပြန်လာပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အံ့ဩတုန်လှုပ်မှုတွေနဲ့အတူ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲ မှတ်တမ်းအမျိုးမျိုးကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီလထဲမှာလည်း ပြိုင်ဘက်ကင်းပြီး ထူးခြားသောအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Selena Gomez နဲ့လည်း collaborate...
သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်လိုမှ မျှော်လင့်မထားခဲ့ကြတဲ့ ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင် (၅) ဦး
လက်ရှိကိုရီးယားဆယ်လီတွေထဲမှာ တစ်ချိန်က သူတို့ကိုယ်သူတို့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်လိုမှ မမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြတဲ့ Idol တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်တော်တော်များများဟာ ကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးအခွင့်အရေးတွေအကြောင့် သရုပ်ဆောင်လုပ်ငန်းထဲ ယောင်ယမ်းပြီးရောက်သွားပေမယ့်လည်း သူတို့ကိုယ်သူတို့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်အထိတော့ မျှော်လင့်မထားခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီကနေ့မှာတော့ လုံးဝထင်မှတ်မထားဘဲ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်တွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ Lee Jong Suk Lee Jong Suk ဟာ သူငယ်ငယ်လေးကတည်းက မင်းသား...
Mobile Legends ကစားခြင်းက အကျိုးရှိစေတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနေတဲ့အချက်များ
Mobile Legends ဂိမ်းဆိုတာက ဒီနေ့ခေတ် လူငယ်တော်တော်များများရဲ့ကြားထဲမှာ ရေပန်းစားကျော်ကြားနေတဲ့ဂိမ်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး E Sports အဖြစ်နဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိ ဂိမ်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်များများ ရှေးရိုးစွဲလူကြီးတွေကတော့ ဂိမ်းဆော့တာကို အပြစ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပေမယ့် ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်စနစ်နဲ့အတူ ဂိမ်းကစားတာဟာ ကျန်းမာရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းက အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ဝင်ငွေရပေါက်ရလမ်းတွေ တိုးပွားစေတယ်ဆိုတာကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ခံလာရပါပြီ။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ဒီနေ့မှာတော့ Mobile Legends ဂိမ်းကစားခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက်...
BLACKPINK ရဲ့ Jisoo ဟာ ဘာကြောင့် အခြေခံကျကျ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Idol တစ်ယောက်ဖြစ်နေရတာလဲ
BLACKPINK's Jisoo ဟာ သူမရဲ့ ခေါင်းအစ ခြေအဆုံးလှပလွန်းတဲ့ visuals တွေအပြင် သူမရဲ့ အံ့ဩလောက်စရာ ချစ်စဖွယ်ပုံစံလေးနဲ့ နောက်ပြန်လှည့်တတ်တဲ့ အမူအယာလေးကြောင့် လူသိများသူဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ တကယ်ကို idol တစ်ယောက်အဖြစ် မွေးဖွားလာခဲ့သူပါ။ အလွန်နည်းပါးလွန်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေကသာ ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တာဖြစ်ပေမယ့်လည်း အဲဒီ့အလွန်နည်းပါးလွန်းတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ Jisoo တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဘာကြောင့် အဲ့လိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ Idol...
Netizensတွေ သတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး ကိုရီးယားStars (၁၀) ယောက်
ကိုရီယားလူမျိုး ၅၀၀၀၀ နီးပါး မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုရီးယား idols တွေနှင့် သရုပ်ဆောင်တွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ခေါင်းအစ ခြေအဆုံးစျေးအရမ်းကြီးတဲ့ အဆင့်မြင့်အဝတ်အစားတွေနဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့စတားတွေကတော့ တန်ဖိုးကြီး vibes တွေကို တစ်နေ့လုံးဝတ်ဆင်ထားတဲ့အခါ ငြီးငွေ့လာကြပါတယ်။ Exciting DC မှာ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ၅၀၀၀၀ နီးပါးရဲ့ မဲပေးချက်တွေအရ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့ အဆင့်အတန်းရှိပြီး...
ပရိသတ်တွေ နှစ်ခြိုက်သဘောကျကြမယ့် Cookie Media ရဲ့ “နင်ရှိတဲ့ကမ္ဘာရုပ်သံစီးရီး” ဇာတ်လမ်းသစ်
"နင်ရှိတဲ့ကမ္ဘာရုပ်သံစီးရီး" ဇာတ်လမ်းဟာ Cookie Media ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လွှင့်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်သံစီးရီးဇာတ်လမ်းတခုဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ ၂၂ နေ့ကစတင်ကာ Cookie Asia ရုပ်သံလိုင်းကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသလျှက်ရှိပါတယ်။ Cookie Media Myanmar ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ မသူဇာမိုးက Cookie ကို အသုံးပြုသူအများစုဟာ လူငယ်တွေများတဲ့အတွက် သူတို့ကိုရည်ရွယ်ပြီး ခေတ်ရေစီးကြောင်းအနေနဲ့ရော၊ မတူညီတဲ့ ရသမျိုးတွေပေးစွမ်းချင်တာကြောင့်မို့ရော ရိုက်ကူးပုံဖော်ဖို့...
ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံးသော K-Pop အမျိုးသမီးအဆိုတော် ၅ယောက်
ကိုရီးယား K-Pop တေးဂီတကို လူကြိုက်များလာတာနဲ့အမျှ K-Pop အဆိုတော်တွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ ငွေကြေးချမ်းသာမှုတွေကလည်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ သူတို့ရဲ့ ဂီတလုပ်ငန်းကနေ ရရှိတဲ့ဝင်ငွေ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနဲ့ ကြော်ငြာများ၊ တီဗွီဇာတ်လမ်းများ၊ လူမှုမီဒီယာများမှ ဝင်ငွေများနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးမှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါတယ်။ IU (Lee Ji-Eun) IU (Lee Ji-Eun) သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးသော...
Blackpink ရဲ့ ”How You Like That”ဟာ BTS အဖွဲ့ကိုကျော်ပြီး YouTubeသမိုင်းမှာ အအောင်မြင်ဆုံးသော ထိပ်တန်းMVဖြစ်လာ
Topline K-pop မိန်းကလေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Blackpink ဟာ သူတို့ရဲ့ Single Music Video ''How You Like That'' နဲ့အတူ ပရိတ်သတ်ရှေ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာ လူကြည့်အများဆုံး Music Video အဖြစ် Youtube ရဲ့ စံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သောကြာနေ့စတင်ထုတ်လွှင့်ချိန်အတွင်းမှာပဲ လူပေါင်း ၁.၆၅ သန်းဟာ How You...
ဤပုံနှစ်ပုံရဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်တွေကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသလား
ဟန်ဂေရီယန်အနုပညာရှင် Gergely Dudás က လျှို့ဝှက်ရုပ်ပုံတွေရဲ့ ပဟေဠိတွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ Gergely Dudás ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ နှင်းလျှောစီးနေတဲ့ လူတွေကြားထဲမှာ Panda တစ်ကောင်ပါဝင်တဲ့ ပဟေဠိတစ်ခုကြောင့် အွန်လိုင်းမှာ လူတွေစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရသူပါ။ သူ့ရဲ့ အားလပ်ရက်တွေကိုလည်း ပဟေဠိတွေလုပ်ပြီးတော့ ကုန်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခုမျှဝေပေးမယ့်ပုံကလည်း အားလုံးအတူတူလို့ ထင်ရပေမယ့် ကွဲပြားခြားနားချက် (၇) ချက်ရှိပါတယ်။...
အမှန်တကယ်ချစ်ကြတဲ့ စုံတွဲတိုင်း ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ချစ်စရာအမူအရာရုပ်ပုံ (၃၀) ပုံ
သင်တစ်စုံတစ်ဦးကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အခါ လက်ကလေးတွေကိုင်ထားခြင်း၊ အတူတကွခရီးထွက်ခြင်း နှင့် လူမှုမီဒီယာတွေမှာ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ချစ်စရာဓာတ်ပုံတွေကို မျှဝေခြင်း (အမြဲတမ်းမဟုတ်)က အရေးပါတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ အမှန်တကယ် ချစ်တတ်လာတဲ့အခါ သင့်လက်တွဲဖော်က ပုံမှန်ထက်နောက်ကျတဲ့အခါ စိတ်ပူတတ်လာမယ်။ သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို အတူတူဖြေရှင်းပေးချင်လာမယ်။ သူ/သူမ နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါ အရမ်းဂရုစိုက်တတ်လာမယ်။ အချစ်စစ်ဆိုတာ သင့်လက်တွဲဖော်ကို ခြွင်းချက်မရှိတဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက လိုအပ်နေချိန်တိုင်းမှာ တောင့်တစရာမလိုဘဲ...